Guddoomiyaha Baarlamaanka oo goor dhow war ka soo saaraya Mooshinka laga keenay Madaxweynaha – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 20 December 2018 20 December 2018
Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu war ka soo saaray mooshinka muranka badan dhaliyay ee 9-kii bishan laga keenay Madaxweyne Farmaajo.
Ilo wareedyo kala duwan ayaa xaqiijinaya in Guddoomiye Mursal uu ku dhawaaqi doono in Mooshinka laga keenay Madaxweynaha laga laabtay, kaddib markii Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka ka laabteen.
Lama oga waxa lagu xaliyay mooshinka, iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay socdeen wada hadalo hoose oo Madaxda dowladda ka lahaayeen arrimaha mooshinka iyo xaaladaha uu dalka geliyay.
Faafaahin:- Dil goor dhaw ka dhacay magaalada muqdisho